Gore rakapera nhau dzakabvaruka kuti iyo firimu pasi pezita rekuti umhutu gungwa yaizove yakateedzana mukati meApple TV + nharaunda. Isu tinoziva kuti chitsauko chekutanga chinozoburitswa mukupera kwemwedzi uno uye Apple inoda kuti tivhure miromo yedu na tirera iyo yatove kuwanikwa kuburikidza neyako Youtube chiteshi.
Iyo Mosquito Coast, Harrison Ford's ngano firimu kubva kunopera ma80s, ichauya kuhupenyu zvakare asi ino nguva mune akateedzana fomu. Ichave iri paApple Tv + uye ichaverenga game Justin Theroux, Melissa George, Logan Polish, naGabriel Bateman. Kubva tava kutoona turera yenyaya dzino dzakateedzana kuti kana tikazvibvumira kutorwa nemifananidzo yekutanga iyi, inovimbisa zvakawanda.
Iyi nhanho inoshamisa inotipa isu nerwendo rune njodzi rweanonyanya kufunga nezvakanaka mugadziri, kufinhwa nekutenga kwenzanga yazvino, Allie Fox (anoridzwa naJustin Theroux), uyo anodzura mhuri yake kuMexico pavanoerekana vazviwana vatiza kubva kuhurumende yeUS. Nharo inosara uye inokudza kuburitswa kwaPaul Theroux uyo ava nemakore makumi mana ekuberekwa, asi sezvatinoona ichiri mufashoni.
Inotevera Kubvumbi 30 Iwe une musangano paApple TV + kuti ukwanise kuona kutanga kwenyaya dzakateedzana. Panguva ino, unogona kuvhura muromo wako neturera. Sumo pfupi yezvakamirira isu uye sei zvinoita senge hupenyu hwakareruka uye hwakanyarara unoshanduka kuita inopesana.
Mumaminetsi maviri nehafu chete, zvishoma zvinogona kutaurwa asi Apple yakwanisa kutora mukana wenguva ino uye yagadzira danda rechokwadi remwenje iro richakwevera vateereri kumhenderekedzo yeumhutu. Sevha zuva racho, Kubvumbi 2, premiere yenyowani nyowani paApple TV +
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » Yekutanga tirera yeMosquito Coast mwedzi mumwe mushure mekutanga kwayo